Dilal ka dhacay Muqdisho iyo amniga oo la adkeeyay – Xorriya Online
Kooxo ku hubeysnaa Bastoolado ayaa saakay gudaha degmada Warta-nabadda ee Gobolka Banaadir ku dilay laba Nin oo la sheegay inay ahaayeen dad shacab ah, waxaana kasoo baxaya falkaas warar kala duwan.
Goobjoogayaal ayaa ku warramay in dilkaa uu ka dhacay xaafadda Xamar-jidiid ee degmada Warta-nabadda, isla markaana loo geystay labada Nin, xilli ay ku sugnaayeen halkaas, iyagoo u geeriyooday rasaas lagu dhuftay.
Ciidamo ka tirsan kuwa Booliska dowladda Federaalka ayaa tegay goobta uu falku ka dhacay, iyagoona qaaday Meydadka labada Nin ee la dilay, kuwaasi oo loo qaaday dhinaca Xarunta CID-da.
Wararka qaarkood ee la helayo ayaa waxaa ay sheegayaan in raggaas la dilay ay ahaayeen Askar ka tirsan Ciidanka dowladda Federaalka Soomaaliya, in kastoo aan la xaqiijin.
Magaalada Muqdisho ee Caasimadda dalka ayaa waxaa shalay ka dhacay dilal qorsheysan oo loo geystay Askar iyo dad shacab ah, waxaana sidoo kalena ka dhacay qarax khasaaro geystay oo lala eegtay Xildhibaano horey.
Inta badan dilalka iyo weerarada maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayay Muqdisho ayaa waxaa mas’uuliyadooda sheegtay Al-shabaab, waxaana xusid mudan in sigaar ah Caasimadda ugu soo badanayaan qaraxyada miino ee dhulka lagu aaso.
Dowladda ayaa Ciidamo dheeraad ah kusoo daadisay Maanta wadooyinka Caasimadda kadib markii qaraxyo iyo dilal dhowr ah ay ka dhaceen maalmihii lasoo dhaafay.